ဧရာညီနောင်: hotfile, rapidshare, megaupload, download.speedbit, 4shared နှင့်အခြားသော hosting ဆိုက်တွေက ဖိုင်တွေကို စောင့်စရာမလိုဘဲ download လုပ်ရအောင်
hotfile, rapidshare, megaupload, download.speedbit, 4shared နှင့်အခြားသော hosting ဆိုက်တွေက ဖိုင်တွေကို စောင့်စရာမလိုဘဲ download လုပ်ရအောင်
ဒီပို့စ်လေးကလည်း ပို့စ်အဟောင်းလေးထဲက တစ်ခုပါပဲ....... အရင်တစ်ခါ ကိုညီနေမင်း ဆိုဒ်ကိုရောက်ရင်းနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ကြိုက်တာနဲ့ ယူလာခဲ့တာပါ.......အခုတော့ Download လုပ်ရတာအဆင်မပြေတာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ထင်ရတာနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ပြန်တင်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်.......Premium hosting တွေနဲ့ ဒေါင်းလော့မဆွဲ နိုင်တဲ့သူတွေ အတွက် ဒီပို့စ်လေးက အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်.......။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ Download လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်.......။ ကိုယ်ရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာလေးတော့ မှန်အောင်ဖြည့်ပေးကြနော်...... တစ်ဆင့်ချင်းဆီကို သေချာလေးလုပ်ဆောင်ပေးသွားပါဗျာ.......။
အဲ့လိုဝင်လာမှာပါ . အောက်က http://www.fileflyer.com/view/gNChjBO ဆိုတာ မိမိ Download လုပ်မယ့် Link ပါပဲဗျာ . အဲ့ဒီ့ Link လေးကိုနှိပ်ပြီး Download ကိုသာရွေးပေးလိုက်ပါ...။